10 Qalabka Kormeerka Noocyada ah ee Aad Bilaash Ugu Bilaabi Karto | Martech Zone
10 Qalabka Kormeerka Noocyada ah ee Aad Bilaash Ugu Bilaabi Karto Bilaash
Isniin, April 5, 2021 Isniin, April 5, 2021 Anna Bredava
Suuqgeyntu waa goob aqoon aad u baaxad weyn leh taas oo mararka qaar noqon karta mid aad u culus. Waxay dareemeysaa inaad ubaahantahay inaad sameyso waxyaabo qosol badan hal mar: ka fikir fikirkaaga istaraatiijiyada suuqgeynta, qorsheyso waxyaabaha kujira, isha ku hay SEO iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo waxbadan.
Nasiib wanaag, marwalba waxaa jira shahiid na caawiya. Aaladda suuq geynta culeyska ka qaadi kara garbahayaga oo aan otomaatig ka noqon karo qaybaha daalka yar ama ka xiisaha yar suuqgeynta. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood waxay na siin karaan aragtiyo aannaan heli karin waddo kale - sida kormeerka calaamaddu sameeyo.
Waa Maxay Ilaalinta Summaddu?
Korjoogteynta Brand waa geeddi-socodka raadinta wada-hadallada la xiriira magacyadaada internetka: baraha bulshada, shirarka, dib u eegista isu-geeyayaasha, bogagga internetka, iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah kanaalada khadka tooska ah, sida inta badan aaladaha warbaahinta bulshada tusaale ahaan, waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay calaamadeeyaan noocyada si ay u soo jiitaan dareenkooda. Laakiin xitaa kuwa la soo sheegay waxay si fudud u seegi karaan buuqa warbaahinta bulshada.
Marka la eego tirada kanaallada internetka ee aan qarinno, waa wax aan macquul ahayn in dad wax walba lagula socdo. Qalabka la socodka Brand waxay kaa caawinayaan inaad la socoto dhaqdhaqaaqa shirkaddaada ee khadka tooska ah, isha ku hayso sumcaddaada, basaasid kuwa kula tartamaya iyo wixii la mid ah.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Dabagalka Summada?
Laakiin runti miyaad u baahan tahay inaad kormeerto waxa dadka kale ka dhahayaan astaantaada internetka? Dabcan waad sameysaa!
La socodka astaantaadu waxay kuu ogolaaneysaa inaad:
Si kafiican ayaa loo fahmayaa bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ah: waxaad ogaan kartaa barnaamijyada warbaahinta bulshada iyo websaydhada ay adeegsadaan, luqadaha ay ku hadlaan, halka ay ku nool yihiin, iwm.
Ogsoonow waxa ay sumadahaagu ku liitaan iyo kuwa daciif ah. Markaad sameyneyso kormeerka calaamadaha waxaad heli kartaa cabashooyinka iyo codsiyada macaamiisha waxaadna ogaan kartaa sida loo horumariyo wax soo saarkaaga.
Ilaali adiga sumcad sumadeed ka dhanka ah dhibaatada PR. Adoo si deg deg ah uhelaya sheegisyo taban oo sumaddaada ah waxaad la macaamili kartaa isla markaaba kahor intaysan u rogin xiisadda warbaahinta bulshada.
Raadi fursado suuq-geyn ah: hel barnaamijyo cusub, fursado dib-u-xirid ah, iyo bulshooyin si aad wax uga iibiso.
Soo hel saamileyaal doonaya inay kula shaqeeyaan.
Taasina waa bilowga. Qalabka kormeerka noocyadu wuu samayn karaa intaas oo dhan iyo in ka badan - waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato midka ku habboon ganacsigaaga.
Aaladaha kormeerka noocyadu way ku kala duwan yihiin awoodooda, qaar baa falanqeyn badan u janjeedha, qaar kalena waxay isku daraan kormeerka qaababka dhajinta iyo jadwalka, qaar waxay diiradda saarayaan barxad gaar ah Liiskan, waxaan ku soo uruuriyay qalab farabadan ujeeddooyinka iyo miisaaniyad kasta. Waxaan rajeynayaa inaad awoodi doontid inaad heshid midka ku habboon.
Dhammaan qalabka kormeerka calaamadaha liiskan ama waa bilaash ama waxay bixiyaan tijaabo bilaash ah.
Awario waa aalad dhageysiga bulshada ah oo kormeeri karta ereyadaada muhiimka ah (oo ay ku jiraan magacaaga magacaaga) waqtiga dhabta ah. Awario waa xulasho ku habboon shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo wakaaladaha suuqgeynta: waxay ku bixisaa falanqeyn xoog leh qiime aad u jaban.
Waxay ka heleysaa dhammaan sheegashooyinkaaga astaantaada warbaahinta bulshada, xarumaha warbaahinta, baloogyada, goleyaasha, iyo shabakadda. Waxaa jira shaandheeyeyaal faahfaahsan oo kuu oggolaanaya inaad kormeerkaaga ka dhigto mid sax ah iyo a Habka raadinta Boolean si ay kaaga caawiso abuuritaanka weydiimo gaar ah oo gaar ah. Tani waxay kaa caawin kartaa haddii magacaaga astaanta uu sidoo kale yahay magac guud (ka fikir Apple).
Iyada oo la adeegsanayo Awario waxaad marin u heli kartaa shaqsiyaadka ku xusan qadka tooska ah iyo falanqaynta tilmaamahan. Qalabku wuxuu ku siinayaa xogta dadka iyo habdhaqanka dadka ka hadlaya astaantaada, waxay kuu oggolaaneysaa inaad isbarbar dhig ku sameysid astaamahaaga kuwa kula tartamaya waxayna kuu soo bandhigeysaa warbixin gaar ah oo ku saabsan Saameeyayaasha ku xusaya magacaaga.
Waad dejin kartaa Awario si ay kuugu soo dirto ogeysiisyo ku saabsan tixraacyo cusub emayl, Slack, ama ogeysiisyo riix.
Qiimeyn: $ 29-299 markii la soo diro bil kasta; qorshooyinka sanadlaha ah waxay keydinayaan 2 bilood.
Maxkamad bilaash ah: 7 maalmood qorshaha bilowga.
Raadinta Bulshada waa ikhtiyaar aad u fiican kuwa sida gaarka ah u xiiseynaya la shaqeynta shaqsiyaadka la xusay. Waa shabakad si fudud loo adeegsado oo ku siineysa sheegis ah astaantaada ilo badan oo ay ka mid yihiin Facebook, Twitter, Reddit, YouTube iyo in ka badan.
Faa'iidada ugu horeysa ee Baadigoobka Bulshadu waa naqshad dareen leh - markaad tagto bogga rasmiga ah isla markiiba waxaa lagaa codsanayaa inaad ku dhejiso ereyadaada muhiimka ah oo aad bilowdo kormeer. Xitaa uma baahnid inaad iska diiwaangeliso emayl. Baadhitaanka Bulsheed wuxuu wakhti yar kuqaataa inuu helo tixraacyo kadibna wuxuu ku tusayaa quud ay ka buuxaan tixraacyo ka yimid ilo kala duwan. Waxaad sidoo kale gujin kartaa tabta falanqaynta si aad u aragto burburka ku xusan ilaha ilaha, waqtiga la dhajiyay, iyo dareenka.
Baadhitaanka Bulshadu waa ikhtiyaar weyn haddii aad rabto inaad si dhakhso leh u hubiso sheegashada ereyga muhiimka ah ee khadka tooska ah. Haddii aad rabto inaad yeelato hanaan nidaam kormeer sumadeed, laga yaabee inaad fiiriso aalado kale oo leh UI aad uga habboon.
Qiimeyn: bilaash, laakiin waad bixin kartaa qorshe (laga bilaabo € 3., 49 illaa € 19.49 bishii) si aad u dejiso digniino emayl iyo kormeer joogto ah.
Maxkamad bilaash ah: qalabku waa lacag la'aan.
Xusuus-qorka waa aalad maareynta warbaahinta bulshada ah oo bixisa kormeer sumadeed oo ay weheliso shaqeynta daabacaadda. Oo si heer sare ah ayey u maamushaa in la sameeyo labadan waxyaalood.
Waxay u oggolaaneysaa ku boodka sheekooyinka ay ka hesho waqtiga dhabta ah iyo la macaamilka isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada. Waxay awood u leedahay inay la socoto sumaddaada labadaba warbaahinta bulshada iyo shabakadda iyo in ka badan 20 luqadood.
Waxa ka dhigaya Mentionlytics-ka inay soo baxaan waa Lataliyaha Cilmiga Bulshada. Waa adeeg AI ah oo ka soo baxa aragtiyo ficil ah oo laga helo xogta bulshada. Tusaale ahaan, haddii aad kormeeraysid astaantaada, waxay si otomaatig ah uheli kartaa inay hesho dhibcaha ugu muhiimsan ee macaamiishaada oo ay kuu muujiso adiga.
Intaas waxaa sii dheer, Mentionlytics waxay bixisaa falanqeyn ku saabsan gaarista iyo saameynta la soo helay, kormeerka tartame, iyo habka raadinta Boolean.
Qiimaha: laga bilaabo $ 39 illaa $ 299 bishii.
Maxkamad bilaash ah: qalabku wuxuu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 14 maalmood ah.
Tweetdeck waa aalad rasmi ah oo ka socota Twitter si ay kaaga caawiso inaad si wax ku ool ah u maamusho. Dashboardka waxaa loo abaabulay durdurro si aad ula socon karto quudinta, ogeysiisyada, iyo sheegidda dhowr akoon hal mar.
Sida kormeerka calaamadda, waxaad sameyn kartaa qulqulka "Seach" kaas oo u gudbin doona dhammaan tilmaamaha ereygaaga muhiimka ah (magaca magacaaga ama boggaaga internetka) dashboardkaaga. Waxay u isticmaashaa caqli isku mid ah Raadinta Horukacsan ee Twitter sidaa darteed waxaad dooran kartaa goobta, qorayaasha, iyo tirada hawlgelinta ee goobahaaga kormeerka sumadda.
Faa'iidada ugu weyn ee Tweetdeck waa isku halaynteeda: maadaama ay tahay badeecad rasmi ah oo Twitter ah, waad hubsan kartaa inay hesho DHAMMAAN tilmaamyada suurtagal ah weligoodna dhib kuma yeelan doonaan isku xirka Twitter-ka.
Faa'iido darrada ayaa ah inay diiradda saartay hal madal oo keliya. Haddii astaantaadu leedahay joogitaan Twitter oo u baahan xal bilaash ah si loola socdo, Tweetdeck waa ikhtiyaar fiican.
Waad la yaabi kartaa inaad aragto SEMrush liistadan - ka dib oo dhan, waxaa ugu horreyn loo yaqaan aaladda SEO. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay awood korjoogteyn calaamado adag, ugu horreyntii, ugu horreyn, iyadoo diiradda la saarayo bogagga internetka, dabcan.
Qalabku wuxuu bixiyaa tixraac dareen leh oo xusaya meesha aad kaga shaqeyn karto shaqsiyaadka boostada iyo boggaga, ku calaamadee oo ku calaamadee, kuna shaandhee natiijooyinka sawir aad u tiro badan Weheliyaan websaydhyada, SEMrush sidoo kale waxay kormeeraan Twitter iyo Instagram.
Maaddaama SEMrush ay tahay mid ku habboon websaydhka, waxay siisaa dadka isticmaala awood ay ku kormeeraan aagag gaar ah. Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu yeelan kartaa kormeerka warbaahinta la xiriirta warshadaha ama degel dib u eegis gaar ah oo noocaaga looga hadlo inta badan.
Intaa waxaa sii dheer, SEMrush waa aalad dhif ah oo ka cabbiri karta taraafikada meelaha laga sheego internetka oo ay ku jiraan xiriiro - isdhexgalkeeda Google Analytics ayaa kuu oggolaaneysa inaad la socoto dhammaan qasabadaha boggaaga.
Qiimeeynta: kormeerka calaamadaha waxaa lagu darayaa Qorshaha Guru oo ku kacaya $ 199 bishii.
Maxkamad bilaash ah: waxaa jira tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah oo la heli karo.
Mention waa shirkad Faransiis ah oo u heellan la socodka iyo dhageysiga wada sheekaysiga internetka. Waxay ku habboon tahay shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo noocyada heer shirkadeed maaddaama ay bixiso falanqeyn badan oo kala duwan iyo isku-dhafnaan leh qalab kale oo loogu talagalay kormeerka astaanta adag.
Waxay muhiimad gaar ah siisaa waqtiga-baaritaanka -waxaa ka duwan aaladaha kale ee liiskan ku jira (Awario, Brandwatch) waxay bixisaa oo keliya xog taariikhi ah (tusaale ahaan sheegitaanno ka weyn toddobaad) sidii wax lagu daro. Waxay ka soo jiidanaysaa xogta Facebook, Instagram, Twitter, forumyada, baloogyada, fiidiyowyada, wararka, webka, iyo xitaa raadiyaha & TV-ga si loo hubiyo inaad ku sii jirtid ogaanshaha dhammaan sheekooyinka ka dhacaya agagaarkaaga.
Qalabka kormeerka calaamaduhu wuxuu bixiyaa dashboard falanqeyn faahfaahsan oo leh dhammaan noocyada cabbiraadaha oo ay ku jiraan jinsiga, falanqaynta dareenka, gaarista iyo wixii la mid ah. Waxay sidoo kale leedahay isdhexgal API ah oo awood kuu siinaya inaad ku dhisto falanqeyntooda aaladdaada ama boggaaga.
Qiimeeyn: aaladdu waa bilaash ilaa 1,000 sheegid. Halkaas, qiimayaashu waxay ka bilowdaan $ 25 bishii.
Maxkamad bilaash ah: Mention wuxuu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 14 maalmood ah qorshooyinka lacag bixinta.
Buzzsumo waa aalad suuq-geyn wax ku iibin ah sidaa darteed awoodaha kormeerkeeda sumadeed waxay dano gaar ah u yeelan kartaa magacyada kuwa mudnaanta siinaya waxyaabaha.
Qalabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto dhammaan waxyaabaha ka hadlaya magacaaga waxayna falanqeynayaan kaqeybgalka hareeraha qayb kasta oo ka kooban. Waxay ku siinaysaa tirada saamiyada ee warbaahinta bulshada, tirada waxyaabaha la jecel yahay, aragtiyada iyo qasabno. Waxay sidoo kale muujineysaa tirooyinka guud ee raadintaada.
Adiga oo dejinaya digniino waxaad kula socon kartaa cusbooneysiin kasta oo maqaal kasta oo cusub iyo boostada ku xardhan astaantaada. Waad abuuri kartaa digniino si aad ula socoto tilmaamaha magaca, sheegashooyinka tartame, waxyaabaha ku jira degel internet, ereyada muhiimka ah ee la xuso, gadaal xiriirka, ama qoraa.
Qiimaha: qiimayaashu waxay ka bilowdaan $ 99.
Maxkamad bilaash ah: waxaa jira tijaabo 30 maalmood oo bilaash ah.
Wada hadal wuxuu magac ku leeyahay bulshada falanqaynta warbaahinta bulshada - waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah aaladaha dhegeysiga bulshada iyo la socodka. Oo saxna waa sidaas!
Waa aalad heer-ganacsiyeed ah oo loogu talagalay kooxaha suuq-geynta waaweyn oo leh dhowr shaashadood gorfeyn iyo aragtiyo ku saleysan AI. Talkwalker wuxuu ku gudbiyaa xogta waqtiga-dhabta ah laakiin sidoo kale wuxuu soo ururiyaa oo uu falanqeeyaa tixraacyada sumadaha ee dib ugu noqonaya illaa laba sano. Mid ka mid ah waxyaabaha kaga duwan Talkwalker tartamayaasheeda waa aqoonsi muuqaal ah: qalabku wuxuu awood u leeyahay inuu ka helo astaantaada sawirrada iyo fiidiyowyada internetka oo dhan.
Talkwalker wuxuu kahelaa xogta 10 shabakadaha warbaahinta bulshada oo ay kujiraan kuwa badan oo mugdi ah sida Webo iyo TV-ga iyo wararka raadiyaha.
Qiimaha: $ 9,600 + / sanadkii.
Maxkamad bilaash ah: maxkamad lacag la'aan ah ma jirto, laakiin waxaa jira demo bilaash ah.
Xalka kale ee korjoogteynta sumcadda heerka shirkaddu waa Meltwater. Waa warbaahin bulsheed iyo falanqeyn suuq-geyn ah oo si weyn ugu tiirsan AI si ay u bixiso aragtiyo ficil ah.
Waxay eegaysaa in ka badan oo kaliya warbaahinta bulshada, iyadoo baareysa malaayiin qoraal maalin kasta oo laga helo baraha bulshada, baloogyada, iyo bogagga wararka. Waxay kala shaandheysaa tixraacyada aan khuseyn waxayna u yeeleysaa dareenka tixraacyada adiga xiisaha u leh
Meltwater waxaa ku jira dashboodyo badan oo kormeera, tilmaamaya, falanqeeya dhaqdhaqaaqaaga internetka. Waxa kale oo aad naqshadeyn kartaa dashboodyo loo habeeyay si aad baahidaada si fiican ugu daboosho.
Qiimaha: $ 4,000 + / sanadkii.
Maxkamad bilaash ah: maxkamad bilaash ah maleh, laakiin waxaad codsan kartaa demo bilaash ah.
NetBase Xalalku waa barxad sirdoon suuq geyn weyn oo ay sidoo kale ku jiraan sirdoonka tartanka, maaraynta dhibaatooyinka, indha indheynta tiknoolajiyada iyo xalal kale.
Waa aaladda kormeerka calaamaddu ay tahay mid horumarsan - waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto astaantaada guud ahaan warbaahinta bulshada, boggaga internetka, iyo kanaaladaha warbaahinta caadiga ah; cadee qodobbada muhiimka ah ee saameynta ku leh xamaasadda sumcadda iyada oo loo marayo falanqaynta dareenka oo ku xir dhammaan macluumaadkaan KPI-yadaada ganacsi.
Marka lagu daro xogta laga helay baraha bulshada, waxay isticmaashaa ilo kale sida sahanno, kooxaha xallinta, qiimeynta, iyo dib u eegista, si loo ogaado inta ugu badan ee suurtogalka ah astaantaada.
Qiimeeyn: NetBase si guud uma soo bandhigeyso macluumaad ku saabsan qiimaheeda, taas oo ay ku badan tahay qalabka heer-ganacsiyeed. Waxaad ku heli kartaa qiimeyn qaas ah adoo la xiriiraya kooxda iibka.
Maxkamad bilaash ah: waxaad codsan kartaa demo bilaash ah.
Waa Maxay Himilooyinkaagu?
La socodka calaamadu waa mid looga baahan yahay shirkad kasta, laakiin qalabka aad isticmaali doontid gabi ahaanba adiga ayey kugu xidhan yihiin. Eeg miisaaniyadaada, meelaha aad rabto inaad daboosho, iyo yoolalkaaga.
Miyaad dooneysaa inaad diirada saarto sheegashada shaqsiyeed si aad u daryeesho codsiyada macaamiisha iyo kordhinta hawlgelinta? Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad falanqeyso bartilmaameedkaaga bartilmaameedka si aad u hagaajiso istaraatiijiyadaada suuqgeynta? Mise waxaad xiiseyneysaa jawaab celinta ka soo baxda degello gaar ah ama dib u eegis ku sameeyayaasha?
Waxaa jira aalad loogu talagalay baahi kasta iyo miisaaniyad, badankooduna waxay bixiyaan noocyo bilaash ah ama tijaabooyin bilaash ah sidaa darteed waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad hesho midka ku habboon baahiyahaaga oo aad tijaabiso!
Afeef: Martech Zone waxay u adeegsanaysaa iskuxirahooda xiriirka SEMrush kor.
Tags: awariokormeerka sumaddaqalabka sumcad brandbuzzsumobiyo dhalaalidxusuusnowsheegidqalabka kormeerkasaldhiggasemrushdhageysiga bulshadaraadiyaha bulshadatalkwalkerTweetdeck
Anna Bredava Monday, April 5, 2021 Monday, April 5, 2021
Anna Bredava waa Khabiir ku takhasustay Suuqgeynta Baraha Bulshada Awario. Waxay wax ka qortaa suuq-geynta dijitaalka ah, isbeddelada warbaahinta bulshada, suuq-geynta ganacsiga yar yar iyo aaladaha caawiya qof kasta oo daneynaya suuq-geynta
Top 10 Qalabka Kaydinta App Store Si Loogu Hormariyo Barnaamijkaaga Kala Duwan ee Barnaamiyada Caan ah
Sida Loo Kordhiyo Cinwaanadaada Cinwaan (Tusaalooyin)